Margarekha डा. गोविन्द केसीले प्रहरी घेराभित्रै जुम्लामा अनसन सुरु – Margarekha
डा. गोविन्द केसीले प्रहरी घेराभित्रै जुम्लामा अनसन सुरु
जुम्ला : डा. गोविन्द केसीले प्रहरी घेराभित्रै अनसन सुरु गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पुरानै स्वरुपमा तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै केसीले १५ अनसन जुम्लाको प्रहरी हिरासतमै सुरु गरेका हुन्।
बुधबार काठमाडौंबाट हिँडेका केसी शुक्रबार साँझ अनसन बस्न जुम्ला नपुग्दै गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनको अनसन स्थल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित मुख्य तीन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
स्नोल्यान्ड होटलमा बसेका डा. केसी शनिबार बिहान प्रतिष्ठान तिर जाँदै गर्दा टुँडिखेलको माथिल्लो गेटमा प्रहरीले रोकेपछि उनी करिब दुई घण्टा बाटोमै बसे। त्यसपछि नागरिक समाज जुम्लाको नेतृत्वमा उनका समर्थकले विरोध प्रदर्शन गर्दै केसीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुर्याए।
प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा नाराबाजी गरेको भन्दै उनका समर्थकमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै केसीलाई पक्राउ गर्यो पक्राउ परेको दुई घण्टा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रतिक्षालयमा रहेका उनले त्यहीबाट अनसन सुरु गरेका हुन्।
प्रहरीकै घेरामा केसीले अनुसन सुरु गरेको भन्दै उनका भााइ किशोर केसीले उनको जिम्मा आफूहरुले नलिने बताएका छन्। प्रहरीको निगरानीमा रहेका डा. केसीले अनसन सुरु गरेपनि उनलाई कहाँ राख्ने भन्ने बिषयमा टुंगो लागेको छैन। अहिले प्रहरीले केसीलाई जिल्ला कबडहलमा राखेको छ। तर, उनी सुरक्षित नरहेको उनका सहयोगी अर्थात् भाइ किशोरको भनाइ छ।
१७ असार २०७५, आईतवार ०६:२५ प्रकाशित